Baarlamaanka 2-Aad Ee Hirshabeelle Oo Caawa Lagu Dhawaaqayo | Wardoon
Home Somali News Baarlamaanka 2-Aad Ee Hirshabeelle Oo Caawa Lagu Dhawaaqayo
Baarlamaanka 2-Aad Ee Hirshabeelle Oo Caawa Lagu Dhawaaqayo
Wararkii ugu dambeeyay ee aan ka heleyno Magaalada Jowhar ee Xarunta Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in Caawa oo tallaado ah lagu dhawaaqi doono Liiska Xildhibaanada Cusub ee Baarlamaanka labaad ee Maamulka Hirshabeelle.
Liiska Xildhibaanada ayaa waxaa loo gudbiyay Guddiga soo xulista Baarlamaanka Hishabeelle, kadib markii Odayaasha dhaqanka ay soo gaba-gabeeyen howsha xuslista xubnaha Baarlamaanka 2-aad.
Ilo-wareedyo ku sugan Magaalada Jowhar ayaa sheegay in Caaawa lagu dhawaaqi doono Liiska Xildhibaanada Cusub, isla markaana haatan ay socota qaban-qaabadii ugu dambeeysay ee lagu shaacinayo.
Sidoo kale Xildhibaanada lasoo xulay ayaa ah sida la xusay kuwo Cusub, sidoo kalena laga reebay Xildhibaano farabadan oo horey uga tirsanaa Baarlamaankii Hirshabeelle ee muddo xileedkiisu dhammaaday ee afartii sano ee lasoo dhaafay soo shaqeynayay.
Odayaasha dhaqanka ayaa maalmihii lasoo dhafay Jowhar ka waday howsha soo xulista Xildhibaanada, iyagoona gudbiyay Liiska Mudanayaasha, waxaa la filayaa in rasmi ah loogu dhawaaqo.
Beesha Xaawaadle oo ka mid ah beelaha ugu weyn uguna saameynta badan HirShabeelle ayaa horey u diiday habka loo wado dhismaha maamulka cusub, iyo in kursiga madaxweynaha uu noqdo mid u furan dhammaan beelaha kale inay u tartamaan.
Si kastaba, warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho lagu diyaariyay xildhibaanada Baarlamanka HirShabeelle ee ka soo gali doono Beesha Xawaadle kadib markii ay beeshaasi diiday soo xulista xubnaha dhankooda ka iman doona.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) iyo Cabdifitaax Xasan Afrax, oo labadooda ka soo jeeda beeshaas, sidoo kalane soo noqday guddoomiyaasha gobalka Hiiraan ay qaateen doorka ugu weyn ee soo xulista Xildhibaanada beesha Xawaadle ee HirShabeelle.
Ammaanka guud ee Magaalada Jowhar ayaa Caawa siweyn loo adkeeyay, waxaana Ciidanka Booliska Dowladda ee Haramcad ee dhawaan la geeyay halkaas xireen inta badan Waddooyinka, sidoo kalena waxaa la yeerayay dhaq-dhaqaaqa meelaha qaar.
Previous articleDAAWO Qamar suugaani hooyadiis oo kahadashay xariga wiilkeeda
Next articleAqriso Magacyada iyo Qabiilada xildhibaanada cusub ee HirShabeelle
Beesha caalamka oo fariin u dirtay Xildhibaanada labada aqal
Faarax Macalin waa hal bacaad lagu lisay heshiiska Axmed madoobe iyo...